Apple dia nanandrana ny streaming 2K afa-po nandritra ny 4 taona | Avy amin'ny mac aho
Fandefasana horonantsary 4K sy ny fahalianana nipoitra tao amin'ny Apple tamin'ny 2013
Wikileaks, tranokala malaza izay mamoaka ny fivoahan'ny antontan-taratasim-bahoaka ary mampalaza azy ny mpamorona azy Julian Assangedia namoaka tatitra izay an'ny Sony Pictures ary izay manondro an'i Apple. Araka io famoahana io dia Apple no nanandrana ny fahazoan-dàlana Sony 4K nanomboka ny taona 2013.
Ny taratasy dia nosoniavin'i Eddy Cue, filoha lefitra zoky ny lozisialy sy serivisy amin'ny Internet ao amin'ny Apple sy ny mpanatanteraka Sony Pictures teo aloha Jim Underwood. Ny antontan-taratasy tafaporitsaka dia an'i Culver, orinasa mpaninjara Sony monina any Culver City, Kalifornia. Ny taratasy dia nanambara fa tamin'ny 2013, Apple dia nangataka ary nahazo ny zon'ny fampiasana filalaovana atiny 4K avy amin'i Sony.
Ao anatin'ny fifanarahana dia namela ny fampiasana ny atiny 4K fotsiny i Apple ho fanandramana ary hanomanana azy amin'ny famerenana amin'ny alàlan'ny streaming. miaraka amina endrika video-on-demand ary mikendry tobim-pialamboly an-trano. Midika izany fa ao anatin'ity fifanarahana manokana ity dia tsy afaka mivarotra na manolotra atiny Sony 4K amin'ny alàlan'ny iTunes ny Apple, fa ny atiny Sony ihany no azo zahana amin'ny 4K ka amin'ny ho avy dia mety hanana an'io fitrangan-javatra io izy.
Midika izany fa hisy izany mila fifanarahana hafa eo amin'i Apple sy Sony hahafahany manolotra atiny Sony 4K amin'ny alàlan'ny iTunes Store.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia naseho fa ny Apple TV ho avy manaraka tsy hanana fanohanan'ny 4K, izay mety midika fa tsy hanolotra an'ity karazana atiny ity amin'ny alàlan'ny iTunes Store i Apple, farafaharatsiny atsy ho atsy. Ny zava-misy fa nisedra an'io karazana atiny io nandritra ny roa taona mahery i Apple dia mampiseho ny fahalianany, na izany aza, hitantsika fa mbola io ihany tsy mikasa ny hampihatra izany amin'ny fotoana fohy ianao.
Tamin'ny voalohany dia kasaina hampahafantarina Apple TV nohavaozina ao amin'ny WWDC 2015 tamin'ny herinandro lasa, saingy tsy nanao izany. Ity fitaovana ity dia toa aseho amin'ny faran'ny taona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Fandefasana horonantsary 4K sy ny fahalianana nipoitra tao amin'ny Apple tamin'ny 2013
Ny Apple Data Future Center any Irlandy dia nanangana ny blèta amin'ireo mponina amin'ny faritra
Antony 5 manohana ary antony 5 manohitra ny jailbreak